Semalt: Webhusaiti Yakanakisisa Yakatsvaga Kuchengetedza Purogiramu yeIndaneti
purogiramu chaiyo kana web application yekuwedzera zvinhu kubva pawebsite. Kunyora zvikumbiro kune webmasters nevakukuri vanoda kutsvaga nyore nyore kuwana ruzivo rwaive kune dzimwe nzvimbo.
Kugadziriswa Kwekugadzirisa Mazano
Kugadzirwa kweWebhu kunogona kuitwa zvisina kunaka nokuda kwekushandisa kwekutsvaga kwemailandi, spamming , uye robocalls. Nokuda kweizvi, vazhinji webmasters vanofarira kuramba kure nazvo. Zvisinei, kana yakagadziriswa nehutano hwekutsvaga webhutori inogona kuva nzira yakasimba zvikuru yekubatsirwa nemhando dzakasiyana dzemapuraneti.
Kugadzirwa Kwingashandiswa Sei
Ngatitarisei inhare yepaIndaneti yevose mahotera munzvimbo. Kana wekugadzira webhusaiti achida kuunganidza imwe hotera imwe neimwe, iye achafanirwa kuaisa mune dheedhi manyore. Izvi zvinowanzoita makumi ezviuru zvemaawa kuti ave nechokwadi chokuti hotera imwe neimwe iri munyika inowanikwa. Ne web scraper , iyo webmaster iyo inogona kuisa mibvunzo yekutsvaga uye kuunganidza iyo data kubva kune zvakasiyana-siyana nzvimbo.
Gadzira kana Kutenga Web Scraper?
Kana iwe uchida webhupu yekushandisa, iwe unogona kuvaka imwe kubva pakutanga kana kushandisa imwe yakagara iripo. Vagadziri vazhinji havakwanisi unyanzvi hunodiwa, ruzivo, zvishandiso, kana zvigadziro zvekuvaka kugadzira zvombo nemaoko. Nhau dzakanaka ndezvekuti pane dzakawanda zvekare zvisati zvavakwa pa-internet.
Nzira Nedzidzo Inoshandiswa muWebra Scraping Software
Kana uchizovaka iwe pachako, unoda kunzwisisa kuti unyanzvi hupi hunobatanidzwa mukuunganidza data. Nyaya dzakawanda dzakagadzirwa neHTML, kushandiswa kweDOM parsing (parsing chibvumirano chimwe chinhu chekufananidzira) kufuta kuburikidza ne HTML kuti ibvise chete mashoko anoda. Iwe unofanirwa kuziva ma-divs, spans, makirasi, uye nhamba yezvinhu zve data iwe waunoda kupedza uye unozviisa muzvirongwa zvako.